Serivisy fandefasana - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Serivisy famonoana maty ho azy-OEM mpanamboatra faritra maty
Ouzhan no mpitondra eran'izao tontolo izao amin'ny famoahana maty marina, niavaka tamin'ny fanomezana tolotra matihanina matihanina matihanina nandritra ny am-polony taona maro. Na eo aza i Ouzhan'sroots ao amin'ny fizotran'ny fanariana maty an-tsokosoko manana ny maha-izy antsika dia mitovy matanjaka amin'ny fanamboarana faritra lehibe kokoa isika amin'ny alàlan'ny fomba mahazatra fanariana efitrano mafana sy mangatsiaka.
Die casting dia fomba fanodinana haingana sy mahomby amin'ny famokarana singa matevina, miendrika harato, mandefitra fatratra. Matetika, ny ampahany manary maty dia azo atambatra ary ampiharina tsy mihodina intsony, ary ny faritra misy kofehy dia azo alefa mivantana koa. Manana lava lava ny bobongolo, ary ny bobongolo maty dia mazàna mamokatra singa maromaro, manomboka amin'ny ana hetsiny ka hatramin'ny an-tapitrisany.
Avy amin'ny faritra kely toy ny faritra fakan-tsary ankapobeny, ny faritra fanoratana, ny fitaovana informatika ary ny haingon-trano, ary koa ny faritra sarotra amin'ny fiara toy ny fiara, ny lokomotif ary ny fiaramanidina, ny ankamaroan'izy ireo dia novokarina tamin'ny fanariana maty.
Ny fahaiza-manao sy ny famoahana Precision Die Ouzhan Precision:
- Famokarana faobe mahomby
- Ny fampidirana ampahany dia manafoana ny asa
- Fahafahana mamorona endrika sarotra
- Kalitao avo lenta amin'ny famokarana betsaka
- Fandeferana henjana amin'ny famoahana ho faty
- Ny lava velona amin'ny bobongolo
Maninona no misafidy ny serivisy fitaterana Ouzhan Die
1. Rehefa mahazo fanontanina avy amin'ny mpanjifa izahay dia hanao fanombanana mialoha mba hahitana raha afaka mamokatra. Raha azo atao, ary aorian'ny fankatoavana ny tetikasa, dia halefanay ny teny nindramina.
2. Ny fikorianay ho an'ny tetikasa vaovao
• Mametraka bobongolo sy baiko santionany ny mpanjifa.
• Mamoaka PI amin'ny 50% amin'ny vidin'ny bobongolo izahay handoavana ny petra-bola.
• Mandefasa sary famolavolana lasitra ho an'ny mpanjifa hankatoavana.
• Atombohy ny famokarana bobongolo aorian'ny nahazoana tahiry 50%.
• Mandefasa santionany sy tahirin-kevitra hafa toy ny fanamarinana ara-materialy sy ny tatitra fanaraha-maso hahazoana fankatoavana.
• Famokarana betsaka aorian'ny fankatoavana ny santionany.
Manana injeniera 10 ao amin'ny ivon'ny R&D izahay, dokotera na profesora avy ao amin'ny University of Science and Technology of China avokoa izy rehetra. Afaka manolotra serivisy famolavolana lasitra matihanina matihanina indrindra izahay.
Manana mpiasa sy fitaovana fanaraha-maso kalitao matihanina izahay, araka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny vokatrao hizaha toetra, ary mamoaka tatitra momba ny fitsapana amin'ny antsipirihany ho an'ny faritra masinina ho an'ny mpanjifa.
Misy habe sy endriny namboarina. Tongasoa eto amintsika hizara ny sary 2D na 3D an'ny mombamomba anao amin'ny milina CNC, andao hiara-hiasa mba hamorona kokoa ny fiainana.
Inona no atao hoe Die Casting Service & Ahoana no fiasan'ny Die Casting
Ny casting casting dia antsoina koa hoe casting casting. Izy io dia fomba fanariana izay arotsaka ao anaty efitrano fanaovan-gazety ny ranon-tsolika an-idina, fenoina haingam-pandeha ny lavaky ny lasitra vy, ary ny ranon-tsiranoka dia mihamafy eo ambany tsindry mba hamoronana casting. Ny toetra mampiavaka ny fanariana maty izay manavaka azy amin'ny fomba fanariana hafa dia ny tsindry ambony sy ny hafainganam-pandeha.
① Ny metaly metaly dia mameno ny lavaka ao ambany fanerena, ary manjary mihombo sy manamafy ny tsindry ambony, ny tsindry mahazatra dia 15-100MPa.
② Ny metaly metaly dia mameno ny lavaka amin'ny hafainganam-pandeha avo, matetika 10-50 metatra isan-tsegondra, ary ny sasany mety mihoatra ny 80 metatra isan-tsegondra (ny hafainganam-pandeha ananan'ny lavaka amin'ny alàlan'ny vavahady anatiny-ny hafainganan'ny vavahady anatiny), dia toy izany koa ny metaly metaly Ny fotoana famenoana dia fohy dia fohy, ary ny lavaka dia mety ho feno 0,01-0,2 segondra (miankina amin'ny haben'ny fanariana).
Ny tombony amin'ny casting casting dia misy ny refy marina amin'ny casting. Matetika izany dia miankina amin'ny fitaovana fanariana. Ny sanda mahazatra dia 0,1 mm ho an'ny haben'ny 2.5 cm voalohany, ary 0,002 mm isaky ny cm fanampiny. Raha ampitahaina amin'ny fizotran'ny fanariana hafa dia milamina ny haavon'ny fanariana azy, ary manodidina ny 1-2,5 microns ny refy radius. Raha ampitahaina amin'ny boaty fasika na fomba fanariana bobongolo maharitra, dia azo vonoina ny hatevin'ny rindrina manodidina ny 0,75 mm. Izy io dia afaka mandefa mivantana ireo rafitra anatiny, toy ny tanany tariby, ireo singa manafana, ary ireo sehatra mitondra hery matanjaka. Ny tombony hafa dia ny fahaizany mampihena na misoroka ny masinina faharoa, ny haingam-pamokarana haingana, ny fanamafisana ny tanjaka hatramin'ny 415 MPa, ary ny fametahana metaly avo lenta.
Fitaovana fanariana maty - Fitaovana ampiasaina amin'ny fanariana Die
Ny metaly ampiasaina amin'ny fanariana maty dia misy ny zinc, varahina, aliminioma, manezioma, firaka, firapotsy ary firaka vita amin'ny firamainty. Na dia tsy fahita firy aza ny vy maty, dia azo atao ihany koa. Ny metaly famonoana maty manokana dia misy ny ZAMAK, ny firaka aliminioma ary ny fenitry ny American Alumni Association: AA380, AA384, AA386, AA390 ary AZ91D magnesium. Ireto ny toetran'ny metaly isan-karazany:
• Zinc: Ny metaly mora maty indrindra, ara-toekarena ny fanamboarana ampahany kely, mora palitao, tanjaka avo compressive, plastika avo lenta, ary fiainana maharitra.
• Aluminium: ny fanamboarana maivana sy sarotra ary fanodin-drindrina manify dia manana fahamarinan-toerana avo lenta, fanoherana ny harafesina matanjaka, toetra mekanika tsara, fitondra mandeha amin'ny hafanana sy ny herinaratra ary tanjaka ambony amin'ny mari-pana ambony.
• Maneziôma: mora ampiasaina amin'ny milina, ny tahan'ny lanjan'ny lanjany, ny maivana indrindra amin'ireo metaly maty maty.
• Varahina: hamafin'ny haavo, fanoherana ny harafoana matanjaka, ny toetra mekanika tsara indrindra amin'ny metaly famonoana maty matetika, fanoherana ny fitafiana ary tanjaka akaikin'ny vy.
• Fitarihana sy firapotsy: haavo matevina, avo lenta ny refy, azo ampiasaina ho faritra manokana hanohitra ny harafesina. Ho an'ny fiheverana ny fahasalamam-bahoaka, ity alika ity dia tsy azo ampiasaina ho fanodinana sakafo sy fitaovana fitehirizana. Ny firaka firamainty, firapotsy ary antimony (indraindray misy varahina kely) dia azo ampiasaina hanamboarana karazana tanana sy fitrandrahana amin'ny fanontana pirinty.
Ny fetra farany ambony ho an'ny famoahana maty amin'ny alàlan'ny alimo, varahina, manezioma ary zinc dia 70 lb (32 kg), 10 lb (4,5 kg), 44 lb (20 kg) ary 75 lb (34 kg).
Serivisy fanaovana casting hafa azo ampiasaina
Ny casting casting dia iray amin'ireo fizotran'ny casting. Amin'ny maha-orinasa fanodinana milina any ambony, OuZhan koa dia manana loharanom-pahalalana fantsom-pamokarana hafa any andafy. Afaka manome mpanjifa amin'ny serivisy fanariana hafa rehetra izahay:
1.Fomba fanariana lasitra fasika
Ny fampiasana ny fasika ho toy ny bobongolo dia azo zaraina ho famafazana fasika maitso, fanariana bobongolo fasika maina eny ambonin'ny tany, sns, fa tsy ny fasika rehetra dia azo ampiasaina amin'ny fanariana. Ny tombony dia ambany ny vidiny satria azo ampiasaina indray ny fasika ampiasaina amin'ny bobongolo; ny fatiantoka dia ny famokarana ny bobongolo mandany fotoana, ny bobongolo aza tsy azo ampiasaina intsony, ary ny vokatra vita dia azo aorina aorian'ny fandravana azy.
2. Fomba fanariana lasitra metaly
Mampiasà metaly manana teboka miempo ambony noho ny akora matevina hanaovana lasitra. Anisan'ireny dia zaraina ho fomba fanariana hery misintona, fomba fanariana tsindry ambany ary fomba fanariana tsindry ambony. Miankina amin'ny teboka mitsonika ny bobongolo, ny metaly azo atsipy dia voafetra ihany koa. Ny famoahana déie dia an'ny metaly metaly casting casting.
3. Fomba very savoka
Ity fomba ity dia mety ho ny fomba fandefasana sarimihetsika ivelany sy ny fomba fanariana mafy. Ity fomba ity dia manana fahamendrehana tsara ary azo ampiasaina amin'ny famoahana metaly metaly (toy ny titanium). Na izany aza, noho ny vidin'ny seramika marobe, sy ny filàna hafanana marobe sy famokarana sarotra, dia lafo be ny vidiny.
Fampiharana momba ny serivisy sy ny fizarana Die Casting
Valve sy fantsona
Famaranana ny famoahana Ouzhan Die
Ity misy safidy betsaka amin'ny serivisy famaranana vy amin'ny safidinao ho an'ny milina mihodina amin'ny masinina mba hanatsarana ny fisehoan'ny faritra, ny malama, ny fanoherana ny harafesina ary ny toetra hafa: